Ny Stoic sy ny Epicurean Philosophies
Ahoana no hahasambatra ahy? Ny Epicurean sy Stoic Perspective
Ny fomba hivelomana ny fiainana tsara
Inona no fomba fiaina, Epicurean na Stoic , hahatratra ny fahasambarana lehibe indrindra? Ao amin'ny bokiny hoe "Stoics, Epicureans and Skeptics", ny Classicist RW Sharples dia mamaly ity fanontaniana ity. Mampiditra ireo mpamaky amin'ny fomba fototra izay ahafahana mahasambatra ao anatin'ny fomba fijery filôzôfika, amin'ny alàlan'ny fanarahana ny sekolin'ny hevitra mba hanasongadinana ny tsikera sy ny maha-iraisan'ny roa tonta. Izy dia mamaritra ireo toetra izay heverina ho ilaina mba hahasambatra amin'ny fomba fijery tsirairay, ary mamintina fa ny Epicureanism sy Stoicism dia miombon-kevitra amin'ny finoana Aristoteliana fa "ny karazan'olona iray ary ny fomba fiainan'ny olona iray raisina dia tena hanana ny anjara toerany avy hatrany amin'ny zavatra ataony."
Ny lalana Epicurean mankany amin'ny fahasambarana
Manam-pahaizana milaza fa ny epikorean no manaiky ny fahatsiarovan-tenan'i Aristote amin'ny fitiavan-tena satria ny tanjona amin'ny Epicureanism dia voafaritra ho fahafinaretana vokatry ny fanesorana ny alahelo ara-batana sy ny fanahiana ara-tsaina . Ny fototry ny finoan'ny Epikorean dia miorina amin'ny karazana faniriana telo, anisan'izany ny voajanahary sy ny ilaina , ny voajanahary fa tsy ilaina , ary ny faniriana tsy ara-nofo . Ireo izay manaraka ny sehatry ny Epicureana dia manafoana ny faniriana tsy ara-nofo rehetra, toy ny faniriana hahatratra ny fahefana politika na ny laza satria samy maniry ny fanahiana ireo faniriana ireo. Ny Epikoreanina dia miantehitra amin'ny faniriana izay manafaka ny vatan'ny fanaintainana amin'ny alàlan'ny fametrahana fialofana sy fanalana ny hanoanana amin'ny alalan'ny fanomezana sakafo sy rano, amin'ny fanamarihana fa ireo sakafo tsotra dia manome fahafinaretana toy ny sakafo mahavariana satria ny tanjon'ny sakafo dia ny hahazoana sakafo. Eo amin'ny fototra, mino ireo Epikoreana fa ny olona dia manome lanja ny fahafinaretana voajanahary avy amin'ny firaisana, ny fiarahana, ny fanekena ary ny fitiavana.
Amin'ny fampiharana ny fitsaboana, ny epikoreanina dia mahatsapa ny fanirian'izy ireo ary manana ny fahafahana hankasitraka ny fahaleovan-tena amin'ny fotoana feno. Milaza ireo Epikorean fa ny lalana mankany amin'ny fahasambarana dia tonga amin'ny alàlan'ny fialana amin'ny fiainana ampahibemaso ary mipetraka amin'ny namana akaiky toy ny saina . Manamafy ny tsikera nataon'i Plutarch momba ny Epicureanism ny sombin-tsoratra, izay maneho fa ny fahombiazan'ny fanahin'ny olona no manampy ny olombelona, ​​manaiky ny fivavahana, ary mandray andraikitra amin'ny andraikitra.
Ny "Stoics" amin'ny fahombiazan'ny fahasambarana
Mifanohitra amin'ny Epikoreanina izay manana fikasana fahafinaretana, ny Stoics dia manome ny lanjany lehibe indrindra amin'ny fiarovana ny tenany, amin'ny finoana fa ny hatsaran-toetra sy ny fahendrena dia ny fahaiza-manao ilaina mba hahazoana fahafaham-po . Mihevitra ny Stoics fa ny antony dia mitarika antsika hikatsaka zavatra manokana ary manalavitra ny hafa, mifanaraka amin'izay mety hanompoantsika amin'ny ho avy. Ny Stoics dia manambara ny ilàna ny finoana efatra mba hahazoana fahasambarana, hametraka ny lanjany lehibe indrindra amin'ny hatsaran-toetra avy amin'ny saina irery. Ny harena voaangona nandritra ny androm-piainany no ampiasaina hanatanterahana ny asany marina sy ny lanjan'ny vatan'ny olona iray, izay mamaritra ny fahaiza-manaon'ny olona iray misaina, ny roa dia mampiseho ny finoan'ny Stoics. Farany, na inona na inona vokany dia tsy maintsy manatanteraka mandrakariva ny andraikiny feno hatsaram-panahy. Amin'ny fampisehoana ny fifehezan-tena, velona ny mpanaraka an'i Stoic araka ny hatsaran'ny fahendrena, ny herimpo, ny rariny, ary ny fifehezana . Mifanohitra amin'ny fomba fijerin'i Stoic, Sharples nanamarika ny filazan'i Aristoteles fa ny hatsaran-toetra irery dia tsy hamorona ny fiainana sambatra indrindra, ary tsy amin'ny alalan'ny fampifangaroana ny hatsaran-toetra sy ny zavatra ivelany.
Ny fahitana an'i Aristote
Raha ny fahatanterahan'ny Stoics amin'ny fahatanterahany dia mahafaoka ny fahafaham-po amin'ny fahafahana manome fahafaham-po ny fahafaham-pony, ny hevitra fonosin'ny Epikoreanan'ny fahasambarana dia miorim-paka amin'ny fahazoana any ivelany, izay maharesy ny hanoanana sy mitondra ny fahafaham-po amin'ny sakafo, fialofana ary fiarahana.
Amin'ny famoahana an-tsipirihany amin'ny antsipiriany momba ny Epicureanism sy Stoicism, dia mamela ny mpamaky hamintina fa ny fiforonan'ny fifandraisana feno amin'ny fahasambarana dia mampifandray ireo fampianarana roa; Noho izany, maneho ny finoana an'i Aristote fa ny fahasambarana dia azo avy amin'ny fitambaran'ny hatsaran-toetra sy ny zavatra ivelany .
Stôika, Epikoreanina (Ny fitsipi-pivavahana hellenista)
D. Sedley sy A. Long's, Ireo Filozofa Grika, Vol. I (Cambridge, 1987)
J. Annas-J. Barnes, Ny karazana skeptisma, Cambridge, 1985
L. Groacke, Skeptisie grika, Univ. McGill Queen. Press, 1990
B. Inwood, filozofa grika, Hackett, 1988 [CYA]
B.Mates, The Way Skeptic, Oxford, 1996
R. Sharples, Stoics, Epicureans sy Skeptics, Routledge, 1998 ("Ahoana no hahafaly ahy?", 82-116) [CYA]
Afaka mamono olona iray ve ianao hamonjy olona dimy?
Amin'ny maha-sarotra azy
The Beautiful, The Sublime, ary ny Mahavariana
10 Torohevitra momba ny Fahatakarana ny soratra filôzôfika
Inona no atao hoe fiainana tsara?
Fantaro ireo teôria Philosophical momba ny Nominalisma sy ny Realisme
Fuel Efficient Used Cars amin'ny $ 6000 - $ 8000
Ny fahadisoana tadiavin'ny FBI ho an'ny heloka bevava atao amin'ny ankizy
2017-18 Fomba fampiharana fampiharana mahazatra 4 - Famahana olana
Vavaka ho an'ny besinimaro
Ny Tantara Amerikana momba ny Tantara - 1726 - 1750
Leísmo sy ny fampiasana ny 'Le'
Fanontaniana & fangatahana fangatahana fangatahana
Boky 7 Topa momba ny loko ho an'ny mpanakanto
Top 10 Theme Songs James Bond
Ireo Monk'i Buddhista Voalohany
Miomana amin'ny Krismasy amin'ny Advent Wreath
Fantaro ireo karatra sarobidy azo antoka indrindra
Ny Hira 100 Tsara Indrindra nanomboka tamin'ny taona 1990
Asa fitsikilovana ao amin'ny CIA
Misy Merlin ve?
Mpitondra ny Ryder Cup: Lisitry ny rehetra izay nanompo
University of California Admissions California
Ahoana ny fanasana moto
Ny Anjara sy ny fahaiza-manaon'ny Mpihira Mozika
Ny adihevitry ny filoham-pirenena mahatsikaiky dia mahatsiaro
Famakiana sy famoahana ny fambolena - Ny Toekarena sy ny Tontolo Iainana
Llamas sy Alpacas
Nahoana ny Amerikanina no nandresy ny Ady Meksikana-Amerikana?
Pope John Paul II momba ny fifanambadian'ny samy lahy na ny vavy
Ny fomban'ny mari-panajam-panajana